मौसम अनुकूल हुँदा बढ्यो चियाको उत्पादन
कात्तिक २७, इलाम । विगत वर्षको तुलनामा यस वर्ष (अन्तिम सिजन/अटम सिजन)को चियाको उत्पादन बढेको किसानले बताएका छन् । यस वर्षको अन्तिम सिजनमा मौसम अनुकूल भएकाले चियाको उत्पादन बढेको किसानको भनाइ छ । गएको वर्ष जस्तो पानी नपरेको र चिया पलाउन सहज भएकाले अपेक्षाकृत उत्पादन बढेको हो ।
उत्पादनसँगै चियाको मूल्यसमेत केही हदसम्म उच्च पाउन थालेपछि किसानको चियाप्रतिको वितृष्णासमेत घटेको छ । प्राय अन्य ‘सिजन’मा हरियोपत्ती चियाको प्रतिकिलो रू. ३० देखि ४० मूल्य दिने उद्योगीले मूल्य बढाएर रू. ५० पुयाएपछि किसान हर्षित देखिएका छन् । ‘भदौसम्म पानी परे पनि नयाँ सिजन (अटम) मा मौसम राम्रो भएकाले उत्पादन बढ्यो’, सूर्योदय नगरपालिकाका चिया किसान डम्बर कटुवाल भन्छन्, ‘उद्योगीले पनि चियाको मूल्य बढाए । आम्दानी राम्रै भएको छ ।’ उनका अनुसार यस वर्ष दोब्बर चिया उत्पादन भएको छ ।
कटुवालले अनुसार यस वर्ष विगतका वर्षमा जस्तो चियामा रोग पनि नदेखिएको बताए । त्यसैले पनि चियामा किसानले धेरै खर्च गर्नुपरेन । चियाको उत्पादन बढेसँगै कारखानामा चिया धेरै आउन थालेको इलाम नगरपालिकास्थित साँखुजुङका उद्योगी टंक दाहाल बताउँछन् ।
गएका वर्षमा पानी नै पानी परेको चिया उद्योगमा आउने गरेपनि यसपटक गुणस्तरीय चिया आएकाले चियाको तौल पनि बढेको उनको भनाइ छ । चियाको यस वर्षको अन्तिम सिजन नै यति बेला भएकाले किसान र उद्योगीले मुख्य फाइदा लिने समय पनि यति बेलै हो ।
यो सिजनको चिया गुणस्तरीय हुने भएकाले अन्तराष्ट्रिय बजारमा राम्रो मूल्यमा बिक्ने पनि गर्छ । यो सिजनको चिया अबको १५ देखि २२ दिनसम्म रहन्छ भने त्यसपछि चियाको काँटछाट र गोडमेलको सिजन शुरु हुन्छ ।
मुख्य सिजन भएकाले पनि स्याहारसुसार गर्न धेरै समय चियामा लाग्ने गरेको सूर्योदय नगरपालिकाका अर्का किसान डम्बर प्रधान बताउँछन् । सिजनको शुरुबाटै आन्दोलनका कारण उल्लेखनीय फाइदा लिन नसकेका किसानलाई यो सिजनले केही राहत पुगेको प्रधानको भनाइ छ । अन्तिम सिजनको चिया टिपिसकेपछि भने करीब चार महीनापछि मात्र चिया टिप्ने गरिन्छ । रासस